Hello Nepal News » पत्याउनै मुस्किल : हाम्रो आँखाको आयु ५० करोड वर्ष !
पत्याउनै मुस्किल : हाम्रो आँखाको आयु ५० करोड वर्ष !
सामान्यतः मानिसको आयु ६०–७० वर्ष हुन्छ । देशअनुसार मानिसको औसत आयु फरक–फरक छ । कतिपय मानिस १०० वर्षभन्दा पनि बढी बाच्ने गर्छन् । तर, सबैको औसत आयु एकै हुँदैन । मानिसको स्वस्थताले पनि यसमा ठूलो फरक पार्छ । यदि कुनै मानिस ७० वर्ष वा १०० वर्ष बाँच्यो भने उसको आँखाको आयु पनि ७० वा १०० वर्ष नै हुन्छ त ?
सामान्य मानिसलाई यस्तै लाग्न सक्छ । तर, वैज्ञानिक हिसाबले भने योभन्दा विल्कुलै फरक हुन्छ । तथ्य पत्याउनै नसकिने खालको छ । विज्ञानअनुसार मानिस कलिलो भए पनि आखाँ धेरै पुरानो हुन्छ । मानिस कलिलै भए पनि आँखा भने निकै पुरानो हो । तपाईं–हामी सबैको आँखाको उमेर ५० करोड वर्षको भइसक्यो ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार जीवजन्तुको आँखा ५० करोड वर्ष पुरानो हो । वैज्ञानिकहरूले यो कुराको पुष्टि गर्न ७० करोड वर्ष पुरानो इतिहासलाई प्रस्तुत गरेका छन्, जुनबेला केवल एक कोषीय अमिबा, लेउ, मुगा तथा जिवाणुहरुको मात्र अस्तित्व थियो । वैज्ञानिकले आफ्नो अध्ययनक्रममा ओपसिन्स नामक कोशिकामा ध्यान केन्द्रित गरे, जो प्रकाशप्रति संवेदनशील हुन्छ । यो कोशिकाले जीवमा बिस्तारै–बिस्तारै प्रकाशलाई पहिचान गर्न सुरु गर्यो ।
सोही कोशिका पछि आँखाको रूपमा विकशित भयो । जिवजन्तुमा पहिलोपटक ५० करोड वर्ष पहिले क्याम्ब्रियन युगमा आँखाको विकास भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । अस्ट्रेलियन वैज्ञानिक ट्रेवर ल्याम्बका अनुसार ५० करोड वर्ष पहिलेको समयमा यस्ता धेरै जीवको उत्पत्ति भयो, जसको एक आँखा थिए । ती जीवमा त्यससँगै शरीरका अन्य अंगसमेत विकसित भए ।
तथापि, त्यस समयमा धेरै जनावरको शरीरमा केवल आँखा मात्र हुन्थ्यो । तर, स्नायु प्रणालीको अरू भाग विकास भइसकेको थिएन । झन्डै २० करोड वर्षको विकाक्रमसँगै जीवजन्तुमा अहिलेको जस्तो विकसित आँखाको विकास भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०५:२६
एसी मिलान भर्सेस रोनाल्डो : यस्तो छ विगतमा उनको तथ्यांक